Nin inta baabuur lagu xiray lagu jiiday - BBC Somali - Warar
Nin inta baabuur lagu xiray lagu jiiday
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 1 Maarso, 2013, 11:28 GMT 14:28 SGA
Mico Macia waxaa lagu xiray oo lagu jiiday baabuurka booliiska
Madaxa booliiska dalka Koonfura Afrika ayaa shaqadii ka joojisay sideed booliis ah oo lala xiriiriyay dhimashada nin tagsiile ahaa oo dhintay isaga oo ku jira gacanta booliiska.
Ninkaasi oo u dhashay dalka Mozambique, ayaa ciidanka booliisku waxa ay ku xireen baabuur kadibna waxa ay ku jiideen jidka isaga oo ku xiran baabuurka booliiska.
Dhacdadan oo uu mobile ku duubay qof dadweynaha ka tirsan ayaa waxa laga sii daayay telefishinka dalka Koonfur Afrika.
Madaxa booliiska Koonfur Afrika, Riah Phiyega, oo ka hadleysay shir jaraa'id ayaa waxa ay sheegtay in taliyihii saldhigga Daveyton oo u dhaw magaalada Johannesburg, in shaqadii laga qaaday, inta uu socdo baaritaan la xiriira sida uu ku dhintay ninkaasi.
Tiro yar oo dad banaanbaxaya ah ayaa isugu yimid banaanka hore ee saldhiggaasi booliiska ee uu ku dhintay ninka tagsiilaha ah oo 27-jir aha.
Dadka qaar ayaa waxa ay ku qeylinayeen baabuurta booliiska ee marayay jidka.